Menarana - E.D. Andriamalala (1918 - 1979) - blog de la lecture à l'amour, de l'amour à la lecture
" Willy Randria no anarako.
Toy ny tovolahy rehetra ihany ny fahazazako. Toy ny an'ny tovolahy rehetra ihany ny fiandoham-pahatanorako. Nitia aho, raha notiavina ; nankahala, raha nankahalaina. " (p. 7)
Vitsy ny boky tantara foronina efa novakiako ary naniry mafy tokoa ny hamaky isan-karazany aho. Saingy mbola tsy sendra ary tsy nitady mihintsy no tena marina. Ka tojo aho izao.
Tany an-tsekoly no fotoana nilazana ny tokony namakiana ireo boky tafiditra amin'ny fandaharam-pianarana, nefa noho ny antony maro dia tsy tontosa izany.
Menarana, tantara nosoratana momba ny fitiavana sy ny manodidina azy : eo amin'ny samy mpinamana sy eo amin'ny tanora ihany koa. Nanana ny fomba fijeriny arak'izany ny mpanoratra. Nisarika ny saina hivelatra sy hanadihady ny fiainana.
" ilay fahagola no tafaverina, mivimbina ny fitiavany safomorona, ka mitaky ny fitiavako hifoha teo amin'ny torimasony sady hivelona kokoa fa efa tapitra ny fialan-tsasatra. " (p. 26)
Teo tokoa ny adim-piainana maro izay nitranga sy notantarain'i E.D Andriamalala tao anaty boky. Nampiseho izay fiainana malagasy tany amin'ny faritany sy an-drenivohitra. Ny fahatanorana tokoa dia mandalo sy miserana ary ilay fitiavana maro loko nefa tokana. Fitiavana lalim-paka tsy hay sorohina ! Zavatra mpintranga nefa toa odiana tsy hita.
" zavatra iray monja no misy heviny amiko eto ambany masoandro : ny eo anilanao ! " (p. 35)
Nefa na izany aza tsy ilaozan'izay fitsapana sy sedra maro ny fifankatiavana.
" misafelopeloka sy mivilivily toy nyhafa rehetra ihany koa ise, ary nilaozan'ise ny làla-mahitsy, izay fantatr'ise anefa fa akaiky indrindra amin'ny toerana iray raha ho amin'ny iray. " (p. 39)
Tsotra sy mora azo ny fomba fanoratra ao anati'ny boky Menarana, tsy miolakolaka araka ny lohatenin'ny boky. Toa efa hita soritra foana fa natao ho fanalana andro ilay boky. Tafiditra amin'ireo tantara foronina nentina nanabe voa ny teny malagasy hatrany. E.D Andriamalala izay isan'ireo niaro ny teny malagasy hatrany.
Madagascar, dahalo - enquête sur les bandits du Grand Sud / Bilal Tarabey Vakivakim-piainana de Patrick Andriamangatiana
arinary jean fidèle 04/01/2017 16:23
tsara be le izy anaka
Lalaina 02/04/2016 14:28
Tena Mpanoratra ankafizoko i ED ary efa tena tapitra novakiako daholo ireo bokiny. Tena hainy ny manome aina ny trangam-piainana ka tena tafiditra tanteraka ianao eo am-pamakiana, mihetsim-po sy toa mahita maso izay tantaraina. Boky miaina sa tsy soratra mipetraka. Sarobidy ho ahy dia nataoko natambatro ho boky lehibe iray ho tantara mipetraka, na dia izany aza dia misy vitsy tsy tafiditra. Misaotra amin'ny blog
MYR 05/04/2016 09:07
Mirana 02/07/2015 14:24
izaho manana boky maromaro E.D Andriamalala, ts leo mihitsy aho mamaky an'ireo
Nadia 02/04/2016 03:52
Manahoana Mirana, izaho mitady mafy ny boky Menarana, sao dia mba mety ianao raha ampindrana hohadikako.
nitady eraky ny Antananarivo aho, hatreny @ boky tonta fa tsy misy, ka dia izao ato am Internt sisa. Raha tsy mety aminao dia tsy maninona akory fa manandrana fotsiny ihany aho. Misaotra
TsiazombolaTsiazombola 22/01/2015 11:46
Isan 'ireo tanora nitia sy nihanoka ny soa netin 'ireo boky vitsy voavakiku tamin ' izany fotoana aho!
Tsampaku fa ny hafatr 'ilay boky no nisolo reo ray aman -dreniko zay ef nandao ahy!!!
Alao her ry tanora naman, mis ny lesona tian 'ireo havatsika hapitaina aminao amin'ireny boky ireny, mazotoa ary!
Isan 'ny fitiava -tanindrazana n ftiavan ny tenindrazana!
Mirary soa anao!
Jeanne Ralimahenintsoa 20/05/2014 07:56
Manan-karena teny sy fomba fiteny entina manambara ny fitiavana ny malagasy !!!
Tsy fahampian'ny boky tantara foronina malagasy ve no tsy mampirona ny malagasy hamaky boky malagasy sa araka ilay teneninao hoe tsy nitady ary tsy rototra tamin'ny tantara foronina malagasy ny olona toa anao ?
Fantaro ary mba omeo lanja ny raki-tsoratry ny teninao sy ny lova apetrak'izany !!
TIAKO NY TENIKO - MALAGASY AHO
MYR 20/05/2014 11:12
Rehefa zohina ny olana dia maro tokoa, manomboka amin'ny tsy firaharahiana ny boky miteny malagasy ka hatramin'ny tsy fisian'ny boky amin'ny teny malagasy miparitaka.
Nefa izany tsy mahasakana ny famakian'ny olona sasany ny boky. Saingy misy tokoa ireo izay minia tsy mamaky ny tenin-drazany.
Tsinjo any ambadika any ny ezaka izay hapetraka ka hivoaran'ny boky amin'ny teny malagasy ...